सबसे आसान र अधिक कुशल वेब स्क्रैपिंग उपकरण - Semalt राय
वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरु लाई एकत्रित, खनन र विभिन्न साइटहरु को डेटा को स्क्रैप गर्न को लागी प्रयोग गरिन्छ।. प्राय: खोज इन्जिनहरूले वेब पेजहरू क्रल गर्न स्क्रैपडेड डेटा प्रयोग गर्छन् र हाललाई के बारेमा नेट कुरा के छ भनेर फेला पार्नुहोस्. गैर-प्राविधिक प्रयोगकर्ताहरूको लागि, यो थाहा पाउनु गाह्रो छ कि वेब स्क्रैप उपकरणहरू उत्तम छन्. यसको विपरीत, मार्केट शोधकर्ताहरु र विश्लेषणात्मक कम्पनीहरूले आफ्नो काम गरेमा उन्नत वेब स्क्रैपिंग र क्रलर सफ्टवेयर प्रयोग गर्दछ, र सही उपकरण छान्ने कुनै समस्या छैन।.
Outwit Hub फायरफक्स एड-अन हो धेरै डेटा निकासी र वेब क्रल सुविधाहरु संग. यसले तपाईंको वेब खोजी सरल गर्दछ र निकालेको डेटा एक उचित र विश्वसनीय ढाँचामा भण्डारण गर्दछ. Outwit Hub एक प्रयोगकर्ताको अनुकूल इन्फेसेसन छ र केहि मिनेटमा केहि वेबसाइटमा स्क्रैप गर्न सक्नुहुन्छ. यो इन्टरनेटमा सबैभन्दा राम्रो र सरल वेब क्रलर उपकरण हो.
यो नि: शुल्क साइट स्क्रैप आर हो जसले प्रतिमा ब्ल्याकहरू वा आंशिक वा सम्पूर्ण वेबसाइटहरूमा हार्ड डिस्कमा अनुमति दिन्छ।. यो वेब क्रलर उपकरणले विशिष्ट वेब पृष्ठहरू स्क्यान गर्दछ र यसलाई तपाइँको यन्त्रमा डाउनलोड गर्नु अघि स्क्रैप गरिएको डेटाको गुणस्तरलाई राख्छ. तपाईं आफ्नो साइट क्रल गरिनेछ बाटो कन्फिगर गर्न विभिन्न सेटिङहरू बनाउन सक्नुहुन्छ. आयात गर्नुहोस्. io मा भर्चुअल DOM वा जाभास्क्रिप्ट पार्स समावेश छैन.
Scraperwiki एक लोकप्रिय वेबसाइट क्रलर हो जुन लागत देखि मुक्त हुन्छ. यसले तुरुन्तै राम्रो स्क्रैप गरिएको डेटा प्रदान गर्दछ र लिनक्स, विन्डोज, यूनिक्स र सूर्य सोलिसिस प्रणालीहरूको लागि उपलब्ध छ. Scraperwiki प्रयोग गर्दै, तपाईंले सजिलै कोडहरू, फोटोहरू, र भिडीयोहरू बिना कोडहरूको आवश्यकता बिना सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ. प्रोक्सी समर्थन यो वेब क्रलर उपकरणको साथमा गति बढाउन र प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्न पनि उपलब्ध छ.
अक्टोपारे एक धेरै शक्तिशाली छ वेब स्क्रेपर . यो सबै प्रकारको डेटाको लागि उपयुक्त छ र सँधै सही परिणाम प्राप्त हुन्छ. अक्टोपारेले यसको व्यापक क्षमताओं र कार्यक्षमता संग वेबसाइटहरू रिप गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ. यसमा दुई प्रमुख मोडहरू छन् (उन्नत मोड र विजार्ड मोड) र प्रोग्रामरहरू र गैर प्रोग्रामरहरूको लागि उपयुक्त छ।. यसको बिन्दु र क्लिक यूआईले तपाईंलाई आफ्नो डेटा पाठ, एचटीएमएल, र एक्सेलको रूपमा लिन्छ र यसलाई सेकेन्ड भित्र आफ्नो हार्ड डिस्कमा डाउनलोड गर्न दिन्छ।.
किमोनो सबै भन्दा राम्रो र नेटमा वेबसाइट क्र्रालरहरू प्रयोग गर्न सजिलो छ. तपाईं यसलाई बहुविध साइटहरू र ब्लगहरू रिप गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंको हार्ड डिस्कमा सम्पूर्ण साइट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ. यो सर्वोत्तम यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल इन्टरफेसको लागि चिनिन्छ. एकपटक तपाईंले किमोनो लन्नु भएपछि, तपाइँ URL मा प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंले स्क्रैप गर्न चाहानु भएको डेटालाई हाइलाइट गर्न सक्नुहुनेछ. यसले तपाईको डेटाबेसमा बचत गरिएको स्क्रैप गरिएको डाटा राख्दछ ताकि तपाई यसलाई कुनैपनि समयमा र कहीं पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ. किमोनोले 13 भन्दा बढी भाषाहरू समर्थन गर्दछ र यसको प्रयोगकर्ताहरूको लागि एफटीपी समर्थन प्रदान गर्दछ.
मोजाडा धेरै प्रकार्य र सुविधाहरु संग एक प्रसिद्ध एक्सटेन्सन हो. यो डाटा शोधकर्ताहरु, डिजिटल मार्केटर्स, र प्रोग्रामरहरुको लागि उपयोगी छ. तपाईं आफ्नो डेटा Google स्प्रिडसिटमा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ, र मोजाडाले कहिल्यै गुणवत्तामा सम्झौता गर्दैन. यो शुरुआती शुरुवात र विशेषज्ञहरु जुन तपाइँको वेब ब्राउजरमा काम गर्दछ को लागि एक राम्रो उपकरण हो Source .